बिदेशमा देशको समाचार र फिल्लिम - Own Things ~ आफ्नै कुरा
बिदेशमा देशको समाचार र फिल्लिम
प्रकाशित गरिएको मिति : 27 September 2008
विगत २ वर्ष देखि - कतारमा नेपाली कमदारहरुको संख्या अत्यधिक मात्रा मा बढेको छ । त्यसैलाई मध्यनजर राखेर नेपाली पत्र पत्रिकले यहाँ आफ्नो बजार क्षेत्रलाई बढ़्वा दिदैछन, यहाँ दोहामा बिहीबार देखिनै यहिबाट पुब्लिश हुने पेपरहरु भेटाउन सकिन्छ साथै स्वदेशबाट आउने निकै पेपर पनी पाइन्छन; जस्तै तपाइले तस्विरमा देख्न सक्नुहुन्छ । कतारको अलेदिया मार्केट - सनैया , नेशनल को आसपास आदि मुख्या - मुख्या ठाउमा । अर्को पिक्चरमा मैले मेरो ब्लगको लागी फोटो खिच्दै गरेको तस्वीर ।
नेशनलको छेउमा शुक्रबारका दिन यसरिनै पुर्बी एशियाका कामदारहरु (विशेस गरी नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, वंगालादेस , श्रीलंका आदि ) - सी डी, लता कपडा , चुरोट , खैनी आदि कुराहरु .....बिक्री गर्न बसेका हुन्छन - यस्तो काम उनिहरुको ओभर टाइम भन्दा पनी फरक पर्दैन । यसबाट उनीहरुलाई राम्रै आमदानी भएको कुरा उनिहरु आफै गर्द्छन । स्वदेशका प्राय: सामग्रीहरु प्रसस्त मात्रामा तपाइले पाऊंन सक्नु हुन्छ - यहाको गलिहरुमा । फोटोहरुमा हेर्नसक्नुहुन्छ।
विदाको दिन यानी सुक्रबार का दिन - दिनभर नै आफ्ना साथीहरु, आफन्तहरु आदि सबैलाई भेटना को लागी यसरी नै कुनै एउटा निश्चित ठाउमा भेला भएर वा कुरेर बस्नेगर्दछ्न । ( अल्फार्ड्न बिल्डिङ्गको अगाडी आफन्त, साथिहरुलाई पर्खेर बसिराहेका नेपालीहरु।
दोहा को नेशनल मा राखिएको सी डी र कपडा पसल हरु ,फुट-पातमा .
पहिला नेशनलको यो ठाउमा नेपालीहरुको जमघट हुने गर्दथियो तर अहिले बढ़ी फोर र भीड़ भयो भनेर यो ठाउलाई निषेध गरेको छ र सिक्यूरिटीहरुले यहाँ मानिशहरु जमा हुन पनी दिदैन ।
नेशनल मा रहेको एउटा मात्र करवा बस स्टेशन को हालत ।
हरी भाइलाई दोहामा पहिलो पटक भेट्दा खेरी - BHDD GROUP KO H - यानि HARI
सिक्यूरिटी को पोषकमा - दाया म , हरी र ओम (हरिको रूममा) । अनी म नेशनलको मेन रोडमा ।
लेफ्ट बाट म , हरी
कती सधै कंप्यूटरमा मात्रै घोत्लिरहनु भनेर मैले यो सुक्रबरको दिन कीबोर्ड लाई भन्दा क्यामेरा लिएर - कतारलाई मेरो ब्लगमा कैद गर्न तमसेर पुरै दिन धूमधामको - घूमघाममा बिताइए ।
(तापाइलाई कस्तो लाग्यो ? मलाई खुसुक भनुस है ल ! )
Dilip Acharya said... September 27, 2008 at 3:59 AM
विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको बारेमा यथार्थ जानकारी पाईयो ।
जे होस त्यहा पनि आफ्नै देश र भाषाका पत्र-पत्रीका पाईदो रहेछ पढदा खुशि लाग्यो ।
उजेली said... September 27, 2008 at 11:30 AM
राम्रो लाग्यो है मलाई त !!!
आकार said... September 27, 2008 at 9:31 PM
कैलाश said... September 30, 2008 at 9:51 AM
बेदनाथजी, तपाईको यो पोष्टको केही तस्बीर हेर्दा त लाग्यो म न्यू रोडको फूटपातमा पत्रिका फिजाइएको छ। अनि सुन्धारा र असनको फूटपातमा कपडा पसल राखिएको छ।
कतारमा रहनु हुने नेपालीहरुको लागि सजिलै नेपाली पत्रपत्रिका उपलब्ध हुनु त गज्जबै हो। अनि एउटा कुरा पनि भनीहालौ है। म ब्रोड ब्याण्डको नेट चलाउछु र पनि तपाईको ब्लग खोल्न सारै समय लाग्छ। आज त कमेन्ट लेख्नलाई ४ पल्ट खोल्नुपर्यो। ब्लगलाई धेरै ह्याभी नबनाउँन सल्लाह छ मेरो। किनकी नेपालको कनेक्सन कमजोर छ। धेरै भारी बोकाउँदा त काम गर्दैन। अनि छ्याप्छ्याप्ती भएका धेरैजसो साइबरमा त झन् इमेल खोल्न नै समय लगाउँछ।
हुन त तपाईकै मर्जी हो है के गर्ने भन्ने बारेमा। मैले त आफूलाई लागेको कुरा भनिदेको मात्रै।
अन्तमा दशैँको शुभकामना छ तपाईलाई। अनि कतारका सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई पनि।
बेदनाथ पुलामी ( उमेश ) said... September 30, 2008 at 11:12 PM
deelip g, ujeli g, akar g ra kailash g sabailai dhanyabad ra bises gari kailash g lai ma aabhar bekt gard6u kin bhane tapaile nepal ma herda hune samasya ko barem bataidinu bhayeko6...ma yeslai dherai havy nabanaune kosis garne 6u ra tapai haru sabaile yespaliko dashain ramrai nai manaunu hola bhan ne kamana gard6u